AKHRISO:-Musharaxiinta oo War kasoo saaray Guddiyadii Puntland iyo Jubbaland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha u taagan qabashada xilka Madaxtinimada dalka ayaa War kasoo saaray Guddiyadii Doorashada heer maamul Goboleed ee saqdii dhexe xalay magacaabeen Madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland.
War-saxaafadeed kasoo baxay Midowga Musharaxiinta ayaa lagu soo dhaweeyay Guddiyada la magacaabay, isla markaana taageeray baaqii Axmed Madoobe iyo Saciid Deni ee ahaan in Shir deg deg ah Madaxda isugu timaado Muqdisho 30-ka bishaan.
Sido kale Musharaxiinta ayaa sheegay in muhiim ay tahay in xal laga gaaro caqabadaha ku hor gudan qabsoomida doorashada dalka ka dhaceysa, iyagoona boggaadiyay dadaalada Beesha Caalamka ee xalinta muranka taagan.
Ugu dambeyn Musharaxiinta Madaxweynaha ayaa dowladda Federaalka ugu baaqay inay qaadato kaalinteda ku aadan xalka, ayna dar-dar galiso doorashooyinka, sidoo kalena ay diyaar u noqoto wada hadalada ay ku baaqayaan Puntland iyo Jubbaland.
“Golaha Midowga Murashaxiinta wuxuu soo dhaweynayaa magacaabista Guddiyada Doorashooyinka Dowlad Goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. Wuxuu kaloo soo dhaweynayaa in ay shir degdeg ah ay isugu yimaadaan Dowladda Federaalka ah, iyo Dowlad Goboleedyada” ayaa lagu yiri Qoraalka kasoo baxay Musharaxiinta.